Inkukhu Yesidala Nemfucumfucu - Ungadliwa
okufanele ucwilise emibonweni ye-cheese fondue
i-mac noshizi nesobho loshizi
utamatisi obhakwe nge-parmesan kanye ne-breadcrumbs
indlela yokwenza amazambane abomvu ku-grill
Inkukhu Yesidala Nemfucumfucu
Inkukhu Yesidala Nemfucumfucu yisidlo esiyintandokazi yomndeni esiduduzayo futhi esimnandi! Le iresiphi elula idalwe kusuka ekuqaleni kufaka phakathi amadombolo wethenda nenkukhu enamanzi kumhluzi owenziwe kalula.
Le recipe iqala ngenkukhu ephelele enamathele ekupheleleni kwethenda ngemifino kanye nezinongo. Amadombolo alula enziwe ngezithako zamakhekhe ayabiliswa emhluzweni kuze kube ngukushuba nangamathenda. Le yintandokazi yomndeni ezocelwa kaninginingi!
Inkukhu yasekhaya kanye namadombolo kuyinto enhle yokudla okunethezekile. Ngenkathi ngithanda ukushesha futhi kulula I-Crock Pot Inkukhu namaDombolo , akukho lutho olufana nokudla okwenziwe ekhaya ngokuphelele.
Ukwenza inkukhu yakudala nemfucumfucu kusuka ekuqaleni kulula kakhulu kunokuba ubungacabanga. Isikhathi esiningi sisetshenziselwa ukuvumela umhluzi ubile uze unambitheke futhi inkukhu iphekwe ukuphelela kwethenda.
inkukhu ala king crock pot recipe
Le iresiphi iqala ngenkukhu, u-anyanisi kanye noqathe abilayo esitofu. Lapho ngenza umhluzi ngikhetha u-anyanisi omkhulu bese ngishiya isikhumba ukuze ngifake umbala owengeziwe nokunambitheka kumhluzi. Zizwe ukhululekile ukwengeza amakhambi akho owathandayo njenge-bay leaf, ingcosana yenkukhu yenkukhu ne-parsley entsha. Uma inkukhu isiphekiwe, iyasuswa kumhluzi kanye nemifino.
Sithanda ukudla imifino njengesitsha eseceleni kodwa zizwe ukhululekile ukusika izaqathe nesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi bese ukungeza emhluzweni wakho.
Uma wake wazibuza ukuthi ungawenza kanjani amadombolo kusukela ekuqaleni, uzothanda ukuthi kulula kanjani! Ngenkathi abanye abantu bethanda ukuzenza nge-Bisquick, ngithola ukuthi kulula kakhulu ukuzenza nezithako okungenzeka usunazo vele ku-pantry yakho!
Ungabambeki kakhulu ekwenzeni amadombolo akho aphelele, akunandaba ukuthi asikwa kanjani. Ukuphela kwento ofuna ukuqiniseka ngayo ukuthi inhlama yakho ikhishelwa ku-1/8 ”obukhulu. Lokhu kunikeza amadombolo ukungaguquguquki okuphelele.
Ekupheleni kokupheka, sithanda ukujiya umhluzi ngesitashi sommbila esincane kanye namanzi uma sekuvuthiwe amadombolo. Mane nje uhlanganise amanani alinganayo ndawonye bese ufaka kancane kancane kuze kube yilapho umhluzi ufinyelela ukuvumelana okufunayo. Uma ukhetha umhluzi we-creamier, zizwe ukhululekile ukwengeza ubisi oluncane noma ukhilimu osindayo uma sekuvuthiwe amadombolo.
Isikhathi sokulungiselela30 imizuzu Isikhathi Sokupheka1 ihora ishumi nanhlanu imizuzu Isikhathi Esiphelele1 ihora Isine imizuzu Izinkonzo8 izinsizakalo UmbhaliUHolly Nilsson Inkukhu Endala Yemfashini namaDumplings yisidlo esiyintandokazi yomndeni esiduduzayo futhi esimnandi! Phrinta Phina
▢1 inkukhu uthathe izicucu
▢3 izaqathe ezinkulu uthathe izingxenye ezintathu kwezintathu
▢3 uhlaka isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi uthathe izingxenye ezintathu kwezintathu
▢8 izinkomishi umhluzi wenkukhu ophansi we-sodium
▢bay leaf noma ingcosana yenkukhu yokunonga ongakukhetha
▢1 ¾ izinkomishi ufulawa kanye nokunye okwengeziwe ngothuli
▢⅓ inkomishi ukunciphisa
▢½ isipuni iphawuda wokubhaka
▢4 wezipuni ummbila
Hlanganisa inkukhu, u-anyanisi, izaqathe nesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi embizeni enkulu. Isikhathi sokunambitha.
Faka umhluzi wenkukhu. Letha emathunjini, unciphise ukushisa, bese ubamba imizuzu engu-45-60 embozwe noma inkukhu ithambe. Ngenkathi umhluzi ubila, lungiselela amadombolo ngezansi.
Susa inkukhu nemifino kumhluzi. Lahla isikhumba namathambo bese uqamula inkukhu esele, beka eceleni.
Faka ngobumnene amadombolo kumhluzi. Imizuzu 15-20 imizuzu noma kuze ithenda.
Hlanganisa inkukhu (kanye nemifino uma ufisa) emhluzweni bese upheka cishe imizuzu engu-2-3 noma uze ushise.
Hlanganisa ufulawa, i-powder yokubhaka, usawoti nokunciphisa ngemfoloko kuze kuhlanganiswe ukufinyezwa.
Faka ubisi kancane ngesikhathi bese uhlanganise uze uhlangane (kungenzeka ungaludingi lonke, ufuna inhlama ethambile kodwa enganamatheli).
Knead a times on a floured surface until dough is smooth.
Phala ngobuningi ubuso bakho bese ugoqa inhlama ibe ⅛ ″ obukhulu. Sika inhlama ibe yimichilo engu-1 ″ x 2.. Ufulawa ngokukhululekile ukugwema ukunamathela.
Pheka umhluzi njengoba kushiwo ngenhla.
UKUQEQESHA UBUZWE (NGOKUZITHANDELA)
Endishini encane hlanganisa izipuni ezine zommbila namanzi wezipuni ama-4.
Ngeza kumhluzi obilayo kancane ngesikhathi eshukumisayo ukufinyelela ukungaguquguquki okufisayo.
Amaqathi kanye nesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi kungakhonzwa ohlangothini noma kuqoshwe bese kufakwa emhluzweni kanye nenkukhu. Imininingwane yokudla okunikeziwe ukulinganisela futhi iyohluka ngokuya ngezindlela zokupheka kanye nemikhiqizo yezithako ezisetshenzisiwe.
Amakholori:464,Amakhabhohayidrethi:32g,Amaprotheni:26g,Amafutha:25g,Amafutha agcwalisiwe:7g,Cholesterol:73mg,I-Sodium:322mg,Potassium:599mg,Umucu:1g,Ushukela:3g,Uvithamini A:4060IU,Uvithamini C:4.4mg,I-calcium:77mg,Insimbi:2.8mg
Igama elingukhiyeinkukhu namadombolo, kusukela ekuqaleni, okwenziwe ekhaya, Inkukhu Yesimanje kanye neDumplings InkamboInkambo Eyinhloko KuphekiweWaseMelika© SpendWithPennies.com. Okuqukethwe nezithombe kuvikelwe i-copyright. Ukwabelana ngale recipe kuyakhuthazwa futhi kuyaziswa. Ukukopisha kanye / noma ukunamathisela izindlela zokupheka ezigcwele kunoma iyiphi imithombo yezokuxhumana akuvunyelwe nakancane. Sicela ubuke inqubomgomo yami yokusebenzisa izithombe lapha .
I-Crock Pot Inkukhu namaDombolo
4 Isithako Sezinkukhu Elayisi Casserole
I-Creamy Chicken Noodle Casserole (kusuka ku-Scratch)